Isotry : nalamina ny tsena mibahan-dalana | NewsMada
Isotry : nalamina ny tsena mibahan-dalana
Nilatsaka teny amin’ny faritra Isotry ireo polisin’ny tsena avy ao amin’ny boriborintany voalohany nandamina ny fifamoivoizana eny an-toerana. Natomboka tamin’ny fandaminana ireo mpivarotra mibahana ny arabe miainga eo amin’ny zaridaina BMH Isotry ka hatreo amin’ny fiangonana Sainte Therèse de l’Enfant Jesus ny asa.
Polisin’ny tsena miisa 30 teo ho eo no nidina teny ka nanisaka ireo mpivarotra mibahana ny arabe. Nanala sy nanapaka ireo talantalan’ny mpivarotra mihoatra izay ampiasaina amin’ny fivarotana izy ireo. Nanentana ihany koa mba hanaja ny toromarika apetraky ny fari-piadidian’ny tanànan’Antananarivo.
Sahirana ireo tompon’andraikitra nandritra ny hetsika satria nisy ireo mpivarotra mafy loha sy sarotra tenenina. Voafehy ihany ireo mpivarotra ary nanaiky ny fandaminana rehefa nandeha ny fandresen-dahatra.
Nisy ny fangatahana manokana nataon’ireo mpivavaka avy ao amin’ny fiangonana Sainte Therèse de l’Enfant Jesus ka nahatonga ny hetsika nataon’ny kaominina. Sahirana tanteraka ireo mpivavaka mivoaka na miditra ny fiangonana, indrindra fa ireo mitondra fiara, amin’ny afitsok’ireo mpivarotra.
Tsikaritra, ankehitriny, fa malalaka ny arabe ary tsy mibahana intsony ireo mpivarotra.
Hitohy hatrany ny hetsika ary mampanantena ireo mpivavaka ny kaominina fa hizotra am-pilaminana amin’izay ny fifamoivoizana eny amin’iny faritra iny, manomboka izao.